Lasix खुराक, प्रिस्क्रिप्शन फार्म, र शक्तिहरु | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार, कल्याण मनोरञ्जन समुदाय खेलहरु समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार भारी खेल प्रेस औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार चेकआउट स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Lasix खुराक, फारम, र शक्तिहरू
Lasix खुराक, फारम, र शक्तिहरू
औषधि जानकारी Lasix ले उच्च रक्तचाप वा edema लाई व्यवहार गर्दछ। यी सर्तहरूको लागि सिफारिस गरिएको खुराक सिफारिशहरू के हुन् सिक्नुहोस्।
फाराम र शक्तिहरू | वयस्कहरूको लागि लिक्सिक्स | बच्चाहरूको लागि लसिक्स | Lasix खुराक प्रतिबन्धहरू | घरपालुवा जनावरहरूको लागि लसिक्स | Lasix कसरी लिने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
Lasix एक ब्रान्ड नाम प्रिस्क्रिप्शन मूत्रवर्धक हो जिसे प्राय: पानीको गोली भनिन्छ किनभने यसले पेशाबको माध्यमबाट शरीरबाट पानी निकाल्न मद्दत गर्दछ। Lasix उच्च रक्तचाप वा edema को उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप पनि भनिन्छ, धमनी भित्तामा रगतको बल धेरै भएमा हुन सक्छ। ईडेमा, तरल पदार्थ धारणा पनि भनिन्छ, शरीरको विभिन्न भागहरूमा फ्याँकिएको धेरै धेरै तरल पदार्थको कारण हुने सूजन हो। सूजन कन्जेस्टिभ मुटुको असफलता, कलेजो सिरोसिस, वा मिर्गौला रोगको कारण हुन सक्छ।
लुसिक्समा सक्रिय घटक फ्यूरोसेमाइड एक लूप मूत्रवर्धक हो जसले किडनीको विशिष्ट भागहरूमा कार्य गर्दछ। Lasix एक ट्याब्लेट को रूप मा उपलब्ध छ, तर जेनेरिक फ्यूरोसेमाइड एक मौखिक समाधान वा अस्पताल सेटिंग्स मा आम इंजेक्शन को रूपमा पनि पाउन सकिन्छ।
सम्बन्धित: फुरोसेमाइडको बारेमा बढि जान्नुहोस् फुरोसेमाइड छुट पाउनुहोस्
१ भियाग्रा गोली को मूल्य कति छ?
Lasix फारम र शक्तिहरू
Lasix ट्याब्लेटहरू उपलब्ध छन् तीन फरक खुराक शक्तिहरू ।
ट्याब्लेट: २० मिलीग्राम (मिलीग्राम), mg० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम
वयस्कहरूको लागि Lasix खुराक
लिक्सिक्स डोजिंग उपचार गरिरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ र प्रायः बिरामीलाई व्यक्तिगत बनाइन्छ। एक व्यक्तिको डोज उसको वा लसिक्सको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ। डिहाईड्रेशन र इलेक्ट्रोलाइट्स (जस्तै सोडियम, पोटेशियम, र क्लोराइड) मा कमी को रोकथाम गर्न सबैभन्दा सानो खुराक संग उत्तम चिकित्सीय प्रभाव प्राप्त गर्न लक्ष्य हो।
मानक Lasix खुराक: –०-११२० मिलीग्राम प्रति दिन एक वा दुई दैनिक खुराक (एडेमा) वा १०- mg० मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक लिन्छ (उच्च रक्तचाप)
अधिकतम सिफारिश Lasix खुराक: ईडेमाको सबैभन्दा गम्भीर मामिलाहरूको लागि प्रति दिन mg०० मिग्रि
संकेत खुराक सुरू गर्दै मानक खुराक अधिकतम खुराक
इडेमा 20-80 मिलीग्राम प्रति दिन एक पटक दिइन्छ –०-११२० मिलीग्राम प्रति दिन १ वा २ दैनिक खुराकमा विभाजन गरियो Mg०० मिलीग्राम प्रति दिन
उच्च रक्तचाप Mg० मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक प्रति दिन १०-–० मिलीग्राम तोकिएको छैन
Edema को लागी Lasix खुराक
Lasix एक्लो वा अर्को संग संयोजन मा प्रयोग गरीन्छ मूत्रवर्धक बच्चाहरु र वयस्कहरुमा कन्फेसिव मुटुको विफलता, मिर्गौला रोग, वा कलेजोको सिरोसिसको साथ तरल पदार्थ प्रतिधारण (edema) लाई कम गर्न। फ्युरोसेमाइडले मिर्गौलाको केही भागलाई असर गर्दछ Hen हेन्ले र नजिकैको ट्युबुलसको लुप जसले पिसाबबाट पानी र नुनको पुन: अवशोषण गर्दछ र रक्तप्रवाहमा फर्काउँछ। फलस्वरूप, धेरै पानी र नुन (सोडियम, क्लोराइड, म्याग्नीशियम, र क्याल्शियम) शरीरबाट हटाइन्छ, शरीरको ऊतकहरूमा तरल पदार्थको निर्माण कम गर्दछ।
Lasix प्रयोग गर्दा, पहिलो खुराक पछि त्यहाँ पेशाबमा द्रुत बृद्धि हुन्छ। व्यक्तिहरूलाई बाथरूममा छिटो र सजिलो पहुँचको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। यदि आवश्यक भएमा र उपचार योजनाको भाग हो भने, व्यक्तिहरूले दोस्रो ल्यासिक्स खुराक आफ्नो पहिलो खुराक पछि to देखि hours घण्टा पछि लिन सक्दछन्। किनकि लासिक्स डोजहरू प्रत्येक व्यक्तिको लागि ब्यक्तिगत गरिएको हो, केहि व्यक्तिहरू लेडेक्सलाई एडेमाको लागि हप्तामा दिनको केही दिन लिनुको फाइदा लिन सक्दछन्।
यो Lasix लाई edema को प्रबन्धनका लागि महत्वपूर्ण छ तिनीहरूको शरीरको वजन ट्र्याक राख्नुहोस् । शरीरको तरल पदार्थमा परिवर्तनहरूले एक व्यक्तिको वजनमा असर गर्न सक्छ। यी तौल परिवर्तनहरू प्रायः एडेमाको पहिलो संकेत हुन सक्छ। एक बाथरूम मापन हुनु मानिसहरूलाई घर मा आफ्नो वजन जाँच गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ र तिनीहरु लाई आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु लाई कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन रिपोर्ट गर्न को लागी अनुमति दिन सक्छ। Lasix खुराक यी वजन परिवर्तनको आधारमा समायोजित गर्न सकिन्छ।
मानक खुराक: –०-११२० प्रति दिन एक वा दुई दैनिक खुराकमा विभाजित
अधिकतम खुराक: Mg०० मिलीग्राम प्रति दिन
उच्च रक्तचाप को लागी Lasix खुराक
लसिक्स एक्लो वा अन्य रक्तचापको साथ उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) को साथ वयस्कहरूलाई औषधी कम गर्न सिफारिस गरिएको छ। सामान्यतया Lasix रक्तचाप कम गर्न अन्य औषधीहरूको साथ प्रयोग गरीन्छ। मूत्रवर्धकको रूपमा, लिक्सिक्सले रक्तप्रवाहमा नुन र पानीको मात्रा कम गर्दछ, समग्र रक्त मात्रा र रक्तचाप घटाउँछ। फ्युरोसेमाइडले रक्त नलीहरूलाई फराकिलो पार्दछ र यसले रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्दछ। उच्च रक्तचापका साथ वयस्कहरूले मूत्रवर्धक शुरू गर्न विचार गर्न थाइजाइड मूत्रवर्धक जस्तै हाइड्रोक्लोरोथियासाइड वा क्लोर्थलिडोन शुरू गर्दछ। लूपिक्स जस्ता लूप डायरेटिक्स, उच्च रक्तचापको उपचारको लागि उत्तम विकल्पहरू हुन् मध्यम देखि गम्भीर किडनी रोगको साथ व्यक्ति वा हृदय विफलताका कारण लक्षणहरू अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरू।
किनकि प्रत्येक व्यक्तिको लागि लासिक्स डोजलाई व्यक्तिगतकरण गरिएको छ, लासिक्स डोज व्यक्तिले लिइरहेको कुनै पनि अन्य रक्तचापको आधारमा समायोजित हुन आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले रक्तचापमा अत्यधिक खण्डहरू रोक्न यी समायोजनहरू गर्न सक्छन्।
मानक खुराक: १०-–० मिलीग्राम दैनिक दुई पटक
अधिकतम खुराक: तोकिएको छैन
बच्चाहरूको लागि Lasix खुराक
Furosemide एफडीए-अनुमोदित छ बालबालिकामा कन्डेस्टेभ हार्ट फेल्योर, किडनी रोग, वा कलेजो रोगको साथ एडेमाको उपचार गर्न। नवजात शिशुहरू र शिशुहरूलाई सामान्यतया फुरोसेमाइड इंजेक्सन वा मौखिक समाधान दिइन्छ, जबकि लिक्सिक्स ट्याब्लेटको रूपमा मात्र उपलब्ध छ। नवजात शिशुहरू, शिशुहरू र बच्चाहरूको लागि खुराक शरीरको तौलबाट निर्धारित गरिन्छ, सामान्यतया शरीरको तौलको प्रत्येक (१) किलोग्राम (किलोग्राम) को लागि फ्युरोसेमाइडको मिलीग्रामबाट शुरू हुन्छ, यो खुराक शरीरको वजनको किलोग्राम प्रति किलोग्राम mg मिलीग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन। एक किलोग्राम बराबर २.२ पाउन्ड हुन्छ।
नवजात शिशुहरूका लागि मानक मौखिक खुराक: १-– मिलीग्राम / किलोग्राम शरीरको वजन प्रति दिन एक पटक दुई पटक दिइन्छ
शिशुहरू र बच्चाहरूको लागि मानक मौखिक खुराक: १ 12– मिलीग्राम / किलोग्राम शरीरको वजन प्रत्येक १२ वा २ hours घण्टा
नवजात शिशुहरू, शिशुहरू, र बच्चाहरूको लागि अधिकतम मौखिक खुराक: प्रति खुराक mg मिलीग्राम / किलोग्राम भन्दा बढि छैन
Lasix खुराक प्रतिबन्धहरू
ल्यासिक्स त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने छैन जुन किडनीले मूत्र (एनूरिया) उत्पादन गर्दैन, जो इलेक्ट्रोलाइट्सले गर्दा कम भएको छ, वा जो हेपाटिक कोमामा छ (कलेजो रोगको कारण मस्तिष्कको कार्य हानि)।
पेट खराब को लागी कुन औषधि राम्रो छ
Than 65 बर्ष भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूले अन्य वयस्कहरूको जस्तै डोसहरू प्राप्त गर्नेछन्, तर तिनीहरू सबैभन्दा कम सिफारिश गरिएको खुराकका साथ सुरू हुनेछन्। केहि औषधिहरूको विपरीत, कम खुराकहरू ती व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक छैनन् जसले अझै पनि सुरक्षित रूपमा लिस्क्स समस्याहरू वा बिरामी रीनल फंक्शनको साथ Lasix प्राप्त गर्न सक्दछन्। यद्यपि कलेजर वा एसाइट्स (पेटमा तरल पदार्थ प्रतिधारण) को सिरोसिस भएका मानिसहरूलाई घनिष्ठ अनुगमन आवश्यक पर्दछ। अधिक मात्रा लसिक्सको साथ सम्भव छ त्यसैले स्वास्थ्य औषधि पेशेवरले निर्देशित गरे अनुसार यो औषधी लिनु महत्त्वपूर्ण छ। यदि अधिक मात्रामा शंका गरिएको छ भने, मानिसहरूले उपचारको लागि तुरून्त आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
घरपालुवा जनावरहरूको लागि लसिक्स डोज
पशु चिकित्सा अभ्यासमा, फ्युरोसेमाइड ट्याब्लेटहरू, मौखिक समाधानहरू, वा बिरालाहरू र कुकुरहरूलगायत सबै स्तनपायी प्रजातिहरूमा ईजेक्शनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पशुचिकित्सकहरूले कन्जेस्टेभ मुटुको असफलता, कलेजोको रोग, वा मृगौलाको रोगको कारण एडेमाको उपचार गर्नका साथै उच्च रक्तचाप, पल्मोनरी एडेमा, हाइपरकलेमिया (अत्यधिक पोटाशियम), र जनावरहरूमा हाइपरकल्सेमिया (अत्यधिक क्याल्सियम) को उपचारको लागि फुरोसेमाइड प्रयोग गर्दछ। यो व्यायाम-प्रेरित फुफ्फुसीय रक्तस्राव (EIPH) घोडाहरूको लागि आपतकालीन उपचारको रूपमा पनि प्रयोग गरीन्छ।
यदि एक पशुचिकित्सकद्वारा आवश्यक निर्धारित गरिएको छ भने, प्राय जसो घरपालुवा जनावरले फरोजेमाइडको IV इंजेक्शनहरू प्राप्त गर्नेछन्, तर केहि सर्तहरूमा फ्युरोसेमाइड ट्याब्लेटहरू वा मौखिक समाधानको मर्मत सम्भार उपचार समावेश हुन सक्छ। खुराक मा निर्भर गर्दछ अवस्था र जनावर । मानवहरू जस्तै, घरपालुवा जनावरहरूलाई इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तन, कम रक्तचाप, र डिहाइड्रसनको स for्केतहरूको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ। कृपया पशुलाई लसिक्स जस्ता मानव औषधि नदिनुहोस्। एक पेशेवर पशुचिकित्सालाई उचित फरोजेमाइड खुराक, डोजिंग अनुसूची, र ढाँचाको उत्तम पालना गर्न पालनाको लागि अनुमति दिनुहोस्।
Lasix कसरी लिने
Lasix एक पटक ट्याब्लेटको रूपमा एक देखि दुई पटक खाना बिना वा बिना लिन्छ।
स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले निर्देशन दिए अनुसार औषधि लिनुहोस्
रातमा उठेर बाथरूम जान जान रोक्न दिनको ढिलाई लेसिक्स लिनबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोस्
ट्याब्लेटलाई पानीले निल्नुहोस्
खानाको साथ औषधी लिनुहोस् यदि यसले पेट दु: ख दिन्छ
यदि लिक्सिक्स बच्चालाई दिइन्छ भने, बच्चाको वजन ध्यानपूर्वक निरीक्षण गर्नुहोस् किनकि खुराक तौलमा आधारित छ। निर्धारित चिकित्सकलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण तौल परिवर्तन को बारे मा अपडेट गर्न आवश्यक छ।
Lasix ले शरीरमा पोटेशियमको स्तर कम गर्दछ, सम्भाव्य रूपमा कम रगत पोटाशियम (hypokalemia) निम्त्याउँछ। लिने बारे डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् पोटेशियम पूरक Lasix साथ।
Sकोठाको तापमान (º moisture moisture –– º––ºF) मा कुनै ओसिलो वा तातोबाट टाढा बन्द, हल्का प्रतिरोधक कन्टेनरमा लसिक्स फा to्यो।
Lasix ट्याब्लेटहरू सेता छन् र प्रकाशमा पर्दा डिस्क्लोर हुनेछ। डिस्क्लोर्ड लसिक्स ट्याब्लेट नखानुहोस्।
Lasix खुराक FAQ हरू
काम गर्न लसिक्स कति समय लाग्छ?
Diuresis (वृद्धि मूत्र उत्पादन र उत्सर्जन) को बारे मा शुरू हुनेछ १ देखि १½ घण्टा मौखिक Lasix को एक खुराक लिए पछि। सबै भन्दा diuresis लगभग दुई घण्टा मा हुनेछ। खाली पेट वा खानाको साथ लसिक्स लिन ठीक छ, तर लसिक्सलाई खानाको साथ लिन सकिन्छ शरीरले कसरी औषधि शोषण गर्दछ प्रभाव पार्दछ । जे होस्, खानेकुराको साथ लसिक्स लिन संकोच नगर्नुहोस् यदि खाली पेटमा लिदा पेट पेट खस्छ भने। दिनदिनै औषधी कसरी लिन्छ भन्ने कुरासँग लगातार रहन महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको सिस्टममा लासिक्स कति समय बस्दछ?
मौखिक Lasix को मूत्रवर्धक प्रभाव लगभग छ देखि आठ घण्टा को लागी रहन्छ। फ्युरोसेमाइड मुख्यतया पेशाबको माध्यमबाट शरीरबाट हटाइन्छ। बिरामी अशक्त मिर्गौला भएकामा, लासिक्स हटाउन तिनीहरूको शरीरहरूको लागि यसले लामो समय लिन सक्दछ।
के हुन्छ यदि मैले Lasix को एक खुराक याद गरें?
छुटेको डोज लिनुहोस् जुन यो याद आयो। यदि अर्को डोजको लागि यो लगभग समय हो भने, त्यतिन्जेल कुर्नुहोस् र नियमित खुराक लिनुहोस्। छुटेको खुराकको लागि अतिरिक्त औषधी नलगाउनुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि लिक्सिक्स जस्ता डायरेटिक्सले निद्रा बाधित गर्न सक्दछ यदि सुत्ने समयमा धेरै नजिक गएमा। ढिलो ढिलो मिस डोज लिनको बारेमा सल्लाहको लागि डाक्टर, फार्मासिष्ट, वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
म कसरी लसिक्स लिन रोक्न सक्छु?
प्रायः बिरामीहरूमा, लासिक्स या त सुरक्षित रूपमा रोक्न वा वैकल्पिक उपचारद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ गम्भीर प्रतिकूल प्रभावहरू बिना। यद्यपि, लिक्सिक्स गम्भीर र स्वास्थ्य-खतरनाक चिकित्सा अवस्थाको लागि सिफारिस गरिएको छ, त्यसकारण डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श नगरेसम्म औषधि लिन बन्द नगर्नुहोस्।
त्यहाँ न nail कवक को लागी एक उपचार हो
लूपिक्स जस्ता लूप डायरेटिक्सले अस्थायी फिर्ती लक्षणहरूको कारण गर्दछ। डायरेटिक्सले शरीरको पेशाबको नियमन (diuresis), पानीको मात्रा, र नुन एकाग्रतालाई असर गर्दछ। जब औषधि बन्द हुन्छ, शरीर धेरै सोडियम क्लोराइड र तरल पदार्थ कायम गरेर overcompensate हुन सक्छ, तरल पदार्थ निर्माण वा उच्च रक्तचाप को कारण। गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका बिरामीहरूमा, जस्तै कन्जेस्टिभ मुटुको विफलता, डायरेटिक निकासीलाई निगरानीको आवश्यकता पर्न सक्छ।
एक डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक लेसिक्स उपचार बन्द गर्न सक्दछ जो कानमा बजिरहेको अनुभव गर्दछ (टिनिटस), सुन्ने शक्ति, गुर्देमा क्षति, अग्नाशयशोथ , हेपाटिक एन्सेफलोपथी, hyperuricemia (अत्यधिक यूरिक एसिड), गम्भीर निर्जलीकरण, गहन इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, वा औषधि लिँदा गम्भीर अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया। गर्भवती महिलाहरूले पनि Lasix लिन रोक्न आवश्यक पर्दछ। फ्युरोसेमाइड स्तनको दुधमा अवस्थित हुन्छ र स्तनपान कम हुन्छ, त्यसैले या त औषधि वा स्तनपान बन्द गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। यदि कुनै कारणवश फ्यूरोसेमाइड रोक्न आवश्यक छ भने, अन्य समान लूप डायरेटिक्स सामेल छन् बुमेटेनाइड , Torsemide , र ईथेक्रिनिक एसिड । थायासाइड डायरेटिक्स र पोटेशियम-स्पेयरिंग डायरेटिक्स अन्य विकल्पहरू हुन्।
Lasix को लागी अधिकतम खुराक के हो?
एकल दिनमा mg०० मिग्रि भन्दा बढी मौखिक फ्यूरोसमाइड लिनु हुँदैन। उच्च खुराक उच्च रक्तचापको लागि विरलै प्रयोग गरिन्छ तर ईडेमाको गम्भीर अवस्थामा सम्भव छ। यदि Lasix या त edema वा उच्च रक्तचाप को लागी पर्याप्त राम्रो काम गरीरहेको छैन, स्वास्थ्य पेशेवरहरु लेसिक्स को उच्च खुराक निर्धारित गर्नु अघि अन्य मूत्रवर्धक वा रक्तचाप औषधी थप्न सक्छ।
केLasix लिने बेला अनुगमन गर्न आवश्यक छ?
अनावश्यक साइड इफेक्टहरू नगरीकन लासिक्स बिरामीहरूको लागि प्रभावकारी छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न, तिनीहरूको डाक्टरले प्राय: तिनीहरूलाई नियमित रूपमा जाँच गराउँदछ। उपचार गरिरहेको अवस्थामा निर्भरता, बिरामीहरूले आफ्नो रक्तचाप, शरीरको वजन, तरल पदार्थ सेवन, र मूत्र आउटपुट जाँच गर्न आवश्यक पर्दछ। थप रूपमा, बिरामीहरूले नियमित इलेक्ट्रोलाइट्स र किडनी प्रकार्यको जाँच गर्न प्रयोगशाला परीक्षणहरू गर्नुपर्नेछ।
के रोगीहरूलाई लिक्सिक्स लिने बेला पूरकको आवश्यक छ?
किनकि लिक्सिक्सले शरीरमा पोटासियमको मात्रा कम गर्न सक्छ, केहि बिरामीहरू लेसिक्स लिदा पोटेशियम सप्लीमेन्ट लिन आवश्यक पर्दछ। व्यक्ति प्राय: पोटासियम पूरक लिन्छन् Klor-Con । मुटुको असफलता वा उच्च रक्तचापको उपचार गर्ने बिरामीहरूको लागि अर्को विकल्प पोटेशियम-स्पेयरिंग डायरेटिक जस्तै स्पिरोनोलाक्टोन हो। स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूले पनि खानाबाट पोटासियमको मात्रा बढाउनको लागि एक व्यक्तिको आहारमा परिवर्तनहरूका लागि सिफारिसहरू गर्न सक्दछन्।
के मधुमेह रोगीहरूले Lasix लिन सक्छन्?
Lasix ले रगत ग्लुकोजको स्तर बढाउन सक्छ। मधुमेह भएका मानिसहरूलाई लासिक्स शुरु हुनेलाई उनीहरूको मधुमेह औषधिहरूको लागि डोज समायोजनको आवश्यक पर्न सक्दछ। मधुमेह भएका बिरामीहरूले नियमित रूपमा आफ्नो रगतमा चिनीको मात्रा निरन्तर जाँच्नु पर्छ। सबै बिरामीहरूका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूलाई उनीहरूको मेडिकल ईतिहासका बारे बताउन महत्त्वपूर्ण छ कि निर्धारित गर्न लसिक्स तिनीहरूको लागि उत्तम विकल्प हो।
कुन औषधी लसिक्ससँग अन्तरक्रिया गर्दछ?
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स Sucralfate (अल्सर औषधि) र पित्त एसिड अनुक्रमले Lasix लाई सहि रूपमा काम गर्नबाट रोक्न सक्छ र डोज अलग गर्नुपर्दछ।
Lasix धेरै छ ड्रग अन्तर्क्रिया यसले उपचारलाई असर गर्न सक्छ। विशेष रूपमा, लसिक्स थेरापीलाई करीव निगरानी आवश्यक छ यदि अन्य मूत्रवर्धक पनि प्रयोग भइरहेको छ। NSAIDs वा अन्य ड्रग्स जस्तो लसिक्सको संयोजन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्दछ फेनिटोइन (जप्ती औषधि), methotrexate (क्यान्सर र संधिवात औषधि)।
थुप्रै औषधीहरूले रक्तचाप कम गर्छन्। लसिक्स जस्ता मूत्रवर्धकसँग मिल्ने बित्तिकै, यी औषधीहरूले रक्तचाप कम गर्ने जोखिम बढाउँछन्, एक अवस्था जसलाई हाइपोटोन भनिन्छ।
अन्तमा, केहि पर्चेको औषधिहरू विशेष गरी खतरनाक हुन्छन् जब Lasix सँग मिल्दछ र बेवास्ता गर्नुपर्दछ। यसमा समावेश छ desmopressin , मार्प्लान (isocarboxazid), र प्लेटिनम-आधारित क्यान्सर ड्रग्स cisplatin । केही ड्रग्सको विषाक्तता, जस्तै लिथियम (द्विध्रुवी विकार औषधि) वा एमिनोग्लाइकोसाइड्स (एन्टिबायोटिक), लाईसिक्सको साथमा लिदा बढाइन्छ। डाक्टरहरू, फार्मासिष्टहरू, र स्वास्थ्यकर्मीहरू यी औषधीको अन्तर्क्रियामा राम्ररी पोख्त छन् र लसिक्सलाई यी औषधिहरूसँग मिल्नबाट जोगिन प्रयास गर्नेछ।
Lasix खुराक को लागी सम्बन्धित स्रोतहरु:
वयस्कहरूमा उच्च रक्तचापको रोकथाम, पत्ता लगाउने, मूल्या ,्कन र व्यवस्थापनको लागि दिशानिर्देश: क्लिनिकल अभ्यास दिशानिर्देशहरूमा अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजी / अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन टास्क फोर्सको रिपोर्ट। , उच्च रक्तचाप
फ्युरोसेमाइड र मानिसमा बुमेटेनाइडको शोषकमा खानाको प्रभाव , क्लिनिकल फार्माकोलजीको ब्रिटिश जर्नल
फ्युरोसेमाइड , StatPearls
Furosemide यौगिक जानकारी , औषधि राष्ट्रिय पुस्तकालय
Lasix , Epocrates
Lasix निर्धारित जानकारी , संयुक्त राज्य अमेरिकाको चिकित्सा पुस्तकालय
प्लम्बको पशु चिकित्सा औषधि पुस्तिका ,।thसंस्करण
दैनिक तौल , हार्ट असफल नर्सहरूको अमेरिकी संघ
एलेभ बनाम इबुप्रोफेन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो चीज
टाइप २ मधुमेह रोगीहरु को लागी औसत रक्त शर्करा स्तर
फेनिलेफ्राइन लिने कति समय पछि म pseudoephedrine लिन सक्छु
गर्भवती महिलाहरु कस्ता दुखाई कम गर्न सक्छन्?